OMG! हजारौँ यात्रु बोकेको यात्रुवाहक रेल दुर्घटनाकाे दुःखद खबर – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > OMG! हजारौँ यात्रु बोकेको यात्रुवाहक रेल दुर्घटनाकाे दुःखद खबर
OMG! हजारौँ यात्रु बोकेको यात्रुवाहक रेल दुर्घटनाकाे दुःखद खबर
admin September 28, 2018 अन्तराष्ट्रिय 0
नयाँ दिल्ली । भारतको पूर्वी राज्य विहारको दरभङ्गा जिल्लामा रेल दुर्घटना भएको छ। रेलको पटरीबाट तीनओटा डिब्बा छुट्टिएर यो दुर्घटना भएको रेल सेवाका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। तर यस दुर्घटनामा मानवीय हताहत भने नभएको समाचारमा प्रष्ट पारिएको छ। रेल सेवाका अधिकारीहरुले सो जानकारी दिएका छन्। बिहारको प्रान्तीय राजधानी पटनाबाट १४१ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पर्ने दरभाङ्गा जिल्लामा सो रेल दुर्घटना भएको छ।
शुक्रबार बिहान सबेरै दरभाङ्गा–कोलकाता एक्पे्रस रेलमार्गमा उक्त दुर्घटना भएको समाचारमा जनाइएको छ। हजारौँ यात्रु बोकेको रेल दुर्घटना हुँदा सबै यात्रुहरु निदाएका बताइएको छ। दरभङ्गास्थित रेल सेवाका एकजना अधिकारीले तर त्यसमा रहेका यात्रुहरु भने सकुशल रहेका जानकारी दिएका छन्।
भारतको रेलमार्ग कतिपय स्थानमा निकै जीर्ण अवस्थामा छ। यसको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि १३७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम लाग्ने र यसको निर्माण अवधि पाँच वर्षं लाग्ने भन्दै भारतीय सरकारले सन् २०१५ मा यो आयोजनाको घोषणा गरेको थियो। भारतमा रेलसेवा यातायातको एक ठूलो र भरपर्दो सेवा हो।
भर्खरै गयो ७.४ म्याग्निच्युडको यस्तो खतरा भूकम्प, होइन के हुन अाँटेकाे यो सँसारमा?
मध्यरातमा अायो विमान दुर्घटनाकाे यस्तो दुःखद खबर
कोरोना नलाग्ने अन्धविश्वासका कारण वि-षाक्त र-क्सी खाँदा सात सयको मृत्यु